eTN Vovonan'ny fizahan-tany Bhutan dia namarana tamin'ny trano feno iray tao New York
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » eTN Vovonan'ny fizahan-tany Bhutan dia namarana tamin'ny trano feno iray tao New York
Aogositra 23, 2017
Sakafo sy divay Bhutanese be dia be no misarika mpizahatany mpizahatany maherin'ny 100, mpizahatany mpizahatany ary mpanao gazety nanomana ny trano anio alina ho an'ny trano iray an'ny Mission for the Kingdom of Bhutan ho an'ny Firenena Mikambana any New York.
Ny talen'ny Filan-kevitry ny fizahantany any Bhutan miaraka amin'ny talen'ny varotra azy, Damcho Rinzin, dia nanitatra ny fomba fijerin'ny Governemanta Royal any Bhutan izay nifikitra mafy tamin'ny politikam-pizahan-tsarimihetsika avo lenta sy ambany / volavola izay manome tanjona ny hamoronana sary ny exclusivity sy ny vokatra avo ho an'i Bhutan.
Bhutan dia fantatra amin'ny anarana hoe aToerana fitsangatsanganana manokana mifototra amin'ny soatoavina Gross National Happiness (GNH).
Ny olona sambatra indrindra tamin'ny talata alina dia ny lohan'ny PATA New York Chapter Simone Bassous. Izy no mpandresy tamin'ny fialan-tsasatra naharitra 5 andro nandritra ny roa nankany Bhutan.
Ny hetsika Bhutan New York Summit Cocktail sy Dinner voalohany dia nokarakarain'ny sy eTurboNews (eTN) ary natrehan'ny mpanonta Juergen Steinmetz, ary ny tonian-dahatsoratr'i New York, eTN Wines.travel, Dr. Elinor Garely.
Air Malta handefa indray ny làlan'i Manchester amin'ny fahavaratra 2018
Skytrains avo be ho an'i Thailand